စော်ကားတာတွေကို ငြိမ်ခံပေးခဲ့ရတဲ့ဘ၀ပါလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - APANNPYAY
Home / အဆိုတော်များ / စော်ကားတာတွေကို ငြိမ်ခံပေးခဲ့ရတဲ့ဘ၀ပါလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
စော်ကားတာတွေကို ငြိမ်ခံပေးခဲ့ရတဲ့ဘ၀ပါလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
Apann Pyay 1:14 PM အဆိုတော်များ Edit
နာမည်ကြီး အဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက ခုနောက်ဆုံး မယ်သီတာ ဆိုတဲ့ ခွေထွက်ထားသည်။ သီချင်းကောင်းများနှင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူမက ခွေများလည်း အဆက်ပြတ်မသွားအောင် ထွက်လေ့ရှိသည်။ သီချင်းများနှင့် နာမည်ကြီးသလို ပထမအိမ်ထောင်နှင့်ကွဲပြီး အောင်လနှင့်ပက်သက်ခဲ့တာ ကြောင့်လည်း လူများပါစပ်ဖျားတွင် အပြောများခဲ့ရပြန်သည်။
အွန်လိုင်ပေါ်တွင် နိုင်ငံခြားကော်ပီသီချင်းများကို ပြန်ဆိုသည့် မြန်မာအဆိုတော်များကို ထုတ်ဖော်နေသည့် ပေ့ခ်ျတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီး ၀ိုင်းစုနောက်ဆုံး သီဆိုထားတဲ့ မယ်သီတာ သီချင်းကိုလည်း သံစဉ်ခိုးယူထားသည်ဟု ဖော်ပြမှုခံထားရသည်။ ထိုအခါ ၀ိုင်းစုဖန်များကလည်း ပြန်လည် ချေပကြရာမှ အွန်လိုင်းပေါ် အကျယ်အကျယ်ပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်။ ခုတော့ ၀ိုင်းစု ခိုင်သိန်းကိုယ်တိုင် ပို့စ်တစ်ခုတင်ကာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ သည်းခံလာတာ များပြီဖြစ်ကြောင် နောင်ကို သည်းမခံနိုင်တော့ကြောင်း သူမကပြောသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဝိုင်းစုလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ရေးသားဖော်ပြပြီး “အစော်ကားခံရပါတယ် ဒီလောက်စော်ကားရင်ကျေနပ်ပါတော့”ဆိုပြီး နောက်ထပ်မရေးမိပါစေနဲ့… ဝိုင်းစု ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ ဝိုင်းစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်facebook wallမှာရော pageမှာရော အင်တာဗျုးများမှာပါ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် ပြောဆိုခြင်းရေးသားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး… တကယ်တမ်း ဝိုင်းစုရဲ့ပုံတွေတင် နာမည်တွေတပ် ဝိုင်းစုဆိုထားတဲ့ သီချင်းစာသားတွေ အခွေTiltleနာမည်တွေနဲ့တကွဖော်ပြပြီး တိုက်ရိုက်စော်ကား ဂုဏ်သိက္ခာချခံခဲ့ရတာ ဝိုင်းစုပါ…
ဘယ်သူကအစော်ကားခံရတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ…အမှန်ကိုအမှားဖြစ်အောင် ပြောင်းပြန်ပြန်မလုပ်ပါနဲ့… အရင်တချိန်ကလို အကွက်ချစီစဉ်မှုတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကို ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိသယ်လာတုံးပဲလား???
ဝိုင်းစုတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်တောင်မအားပါဘူး… ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးအားမှအဆင်ပြေမှာပါ… ဝိုင်းစုမိဘကို ပေါ်တင်တိုက်ရိုက်စော်ကားခဲ့ကြတာတောင် ငြိမ်ခံပေးခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ… ဝဋ်ဆိုတာလည်တတ်ပါတယ်…
“မပတ်သက်ချင်ဘူး မပတ်သက်ချင်ဘူး”ပြောပြောပြီး ဝိုင်းစုတို့အကြောင်းတွေ wallမှာခဏခဏမတင်ပါနဲ့ ဝိုင်းစုတို့က ပိုတောင်မပတ်သက်ချင်ပါဘူး…ဝိုင်းစုကိုပုတ်ခတ်စော်ကားဖို့အတွက် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ စွပ်စွဲပြောဆိုရေးသားခြင်းများဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ… ဝိုင်းစုသည်းခံသင့်သလောက် သည်းခံခဲ့ပြီးပါပြီ
ဒီပို့စ်ကို အောင်လရဲ့ အကောင့်နှင့် တက်တွဲပြီး တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
source-Wine Su Khine Thein Facebook
နာမညျကွီး အဆိုတျောနှငျ့ သရုပျဆောငျ တဈဦးဖွဈသူ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးက ခုနောကျဆုံး မယျသီတာ ဆိုတဲ့ ခှထှေကျထားသညျ။ သီခငျြးကောငျးမြားနှငျ့ နာမညျကွီးလာခဲ့ပွီး ပရိတျသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သူမက ခှမြေားလညျး အဆကျပွတျမသှားအောငျ ထှကျလရှေိ့သညျ။ သီခငျြးမြားနှငျ့ နာမညျကွီးသလို ပထမအိမျထောငျနှငျ့ကှဲပွီး အောငျလနှငျ့ပကျသကျခဲ့တာ ကွောငျ့လညျး လူမြားပါစပျဖြားတှငျ အပွောမြားခဲ့ရပွနျသညျ။
အှနျလိုငျပျေါတှငျ နျိုငျငံခွားကျောပီသီခငျြးမြားကို ပွနျဆိုသညျ့ မွနျမာအဆိုတျောမြားကို ထုတျဖျောနသေညျ့ ပခြေျ့တဈခုထှကျပျေါလာပွီး ဝိုငျးစုနောကျဆုံး သီဆိုထားတဲ့ မယျသီတာ သီခငျြးကိုလညျး သံစဉျခိုးယူထားသညျဟု ဖျောပွမှုခံထားရသညျ။ ထိုအခါ ဝိုငျးစုဖနျမြားကလညျး ပွနျလညျ ခပြေကွရာမှ အှနျလိုငျးပျေါ အကယျြအကယျြပွနျ့နှံ့လာခဲ့သညျ။ ခုတော့ ဝိုငျးစု ခိုငျသိနျးကိုယျတိုငျ ပို့ဈတဈခုတငျကာ ပွောဆိုခဲ့သညျ။ သညျးခံလာတာ မြားပွီဖွဈကွောငျ နောငျကို သညျးမခံနိုငျတော့ကွောငျး သူမကပွောသညျ။
ကြေးဇူးပွု၍ ဝိုငျးစုလို့ ထငျယောငျထငျမှားဖွဈအောငျ ရေးသားဖျောပွပွီး “အစျောကားခံရပါတယျ ဒီလောကျစျောကားရငျကနြေပျပါတော့”ဆိုပွီး နောကျထပျမရေးမိပါစနေဲ့… ဝိုငျးစု ဒီနဒေီ့အခြိနျအထိ ဝိုငျးစုရဲ့ကိုယျပိုငျfacebook wallမှာရော pageမှာရော အငျတာဗြုးမြားမှာပါ မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးအောငျ ပွောဆိုခွငျးရေးသားခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး… တကယျတမျး ဝိုငျးစုရဲ့ပုံတှတေငျ နာမညျတှတေပျ ဝိုငျးစုဆိုထားတဲ့ သီခငျြးစာသားတှေ အခှေTiltleနာမညျတှနေဲ့တကှဖျောပွပွီး တိုကျရိုကျစျောကား ဂုဏျသိက်ခာခခြံခဲ့ရတာ ဝိုငျးစုပါ…
ဘယျသူကအစျောကားခံရတယျဆိုတာ အားလုံးအသိပါ…အမှနျကိုအမှားဖွဈအောငျ ပွောငျးပွနျပွနျမလုပျပါနဲ့… အရငျတခြိနျကလို အကှကျခစြီစဉျမှုတှေ ခွိမျးခွောကျမှုတှေ မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပကျတတျတဲ့ အကငျြ့တှကေို ဒီနဒေီ့အခြိနျအထိသယျလာတုံးပဲလား???
ဝိုငျးစုတို့နှဈယောကျစလုံး ဒီလိုမြိုးလိုကျလုပျဖို့နနေသောသာ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ကိုယျတောငျမအားပါဘူး… ဒီလိုလုပျဖို့ဆိုတာ တျောတျောလေးအားမှအဆငျပွမှောပါ… ဝိုငျးစုမိဘကို ပျေါတငျတိုကျရိုကျစျောကားခဲ့ကွတာတောငျ ငွိမျခံပေးခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ… ဝဋျဆိုတာလညျတတျပါတယျ…
“မပတျသကျခငျြဘူး မပတျသကျခငျြဘူး”ပွောပွောပွီး ဝိုငျးစုတို့အကွောငျးတှေ wallမှာခဏခဏမတငျပါနဲ့ ဝိုငျးစုတို့က ပိုတောငျမပတျသကျခငျြပါဘူး…ဝိုငျးစုကိုပုတျခတျစျောကားဖို့အတှကျ အကွောငျးမရှိအကွောငျးရှာ စှပျစှဲပွောဆိုရေးသားခွငျးမြားဒီတဈခါနောကျဆုံးဖွဈပါစေ… ဝိုငျးစုသညျးခံသငျ့သလောကျ သညျးခံခဲ့ပွီးပါပွီ
ဒီပို့ဈကို အောငျလရဲ့ အကောငျ့နှငျ့ တကျတှဲပွီး တငျထားခွငျးဖွဈသညျ။